ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကူဗလိုင်ခန် ရဲ့ ရေတပ်မဟာ။ ~ MSU Portal
7/27/2012 06:07:00 PM MYANMAR SEAMEN UNION No comments
ခန်းနားကြီးကျယ်သောလေပြင်းမုန်တိုင်းကြီး (သို့) Kamikaze ကြီးလို့ ဂျပန်လူမျိုးတွေ တင်စား ခေါ်ဆိုတဲ့
တိုင်ဖုန်း ကြီးတွေ ကို Divine Wind ဆိုပြီး သူတို့ ဘာလို့ ပူဇော်ကိုးကွယ် ယုံကြည် ကြရသလဲ ဆိုတာ ကို သိချင်ရင်တော့
သူတို့ ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေ ကိုလေ့လာဘို့ လိုပါတယ်။
World War I နှင့် II အပါဝင် ..ရာဇ၀င် အဆက်ဆက်မှာ ယနေ့ အထိ ဘယ်သူမှ ထပ်မံ မပြုနိုင်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းတစ်ခု ကို
၁၃ ရာစု တုန်း က တန်ခိုး အလွန် ထွား ဘုန်းကြီးခဲ့တဲ့ မွန်ဂို ဘုရင် မင်းမြတ် ကူဗလိုင်ခန်က ရေးသားခဲ့ဘူးလေသည်။
အချိန်က ၁၂၇၄ နှင့် ၁၂၈၁ ကြား ကာလ တုန်းကဖြစ်ပါသည်။
အာဏာရှင် ကူဗလိုင်ခန် ဘုရင် မင်းမြတ် ပိုင်ဆိုင်သောရေတပ် သင်္ဘော ၄၄၀၀ ၊စစ်သည် အင်အား ၁၄၂၀၀၀ ရှိတဲ့ ရေတပ်မဟာ ကြီးအတွက်
တစ်ချက် လွှတ်အမိန့်တော် ရွေးချယ်စရာမရှိ တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည့် အမိန့် မှာ ကား
လက်ဝယ်သိမ်းပိုက်ပြီးသော တရုတ် နှင့် ကိုရီးယား ဆိပ်ကမ်းများမှ အခြေပြုခြေကုပ်ယူ ကာ ပင်လယ်ပြင် ရေလက်ကြား
(ယခု Korean Strait) ကိုဖြတ်သန်း ပြီး အာခံဖီဆန်သော ဂျပန်နိုင်ငံ ကို အပြီးသတ် သိမ်းပိုက် ချေမှုန်း အနိုင်ယူရန်ပင်ဖြစ်သည်။
၁၂၆၈ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် ကိုရီးယားကျွန်းစွယ်တို့ အား သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ဂျပန်တို့ အား ၀ပ်တွားခယ အမှူတော် ထမ်းရန်
ရာဇသံအား ဂျပန်တို့ က မသိကျိုးကျွန်ပြု ကာ ဖီဆံ ခဲ့လေသည်။
ထို့ကြောင့် ဂျပန်ကျွန်းအား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းအား စနစ်တစ်ကျ ချမှတ်ကာ..ဂျွမ်းစစ်သည် ၊ လေးစစ်သည်၊ မြင်းစစ်သည်တို့ သည်
ဒီတစ်ခါ တော့ အဏ၀ါရေပြင်ကျယ် ကိုပါလွှမ်းမိုးဖို့ ပြင်ဆင် ခဲ့ရာ........
၁၂၇၄ ခု နှစ် ရဲ့ နေ့စွဲ တစ်ခု မှာ သင်္ဘော အစင်း ၉၀၀၊ စစ်မဟာအင်အား ၄၀၀၀၀ မွန်ဂို၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယားတပ်ပေါင်းစုတို့ ပါဝင်သော
အလွန် အင်အားကြီးမားသော ကူဗလိုင်ကခန် ရေတပ်မဟာက ဂျပန် ကျူရှူး ကျွန်း အနီး ဟာကာတာကမ်းခြေ ကို ၀င်ရောက်ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်လေသည်။
ကမ်းခြေ စစ်ဦး တွင် အငိုက်ဖမ်း လက်ဦး မှု အသာ ဖြင့် အလွယ်တစ်ကူ သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဒေသခံဂျပန်တို့ နောက်ဆုတ်ရလေတော့သည်။
ထိုည ကမ်းခြေတွင် အခြေ ချ အောင်ပွဲခံ၊ ရှေ့ဆက် ချီ ရန် ပြင်ဆင်နေသော တပ်မဟာသည် ပထမ ည ဦး မှာ ပင် ..
မထင်မှတ်သော လေမုန်တိုင်းကြီးပေါ်ပေါက်လာပြီး ၀င်ရောက် တိုက်ခတ်ခြင်းကို ခံရလေတော့ ၏။
လေပြင်းတို့ တစ်ဆတစ်ဆ ကြမ်းတမ်းလာခြင်းကြောင့်ဗျူ ဟာသေနာပတိတို့က အလျင်အမြန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ
ကျောက်ချထားသော စစ်ရေယဉ်တို့ ကို ကျောက်နှုတ် စွန့်ခွာခိုင်းရလေတော့သည်။
Divine Wind ခေါ် Kamikaze ကြီး ၏ တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက် မှုကားကြောက်ခမန်းလိလိ ပေ ၊သင်္ဘော အစီး ၂၀၀ နစ်မြုပ် ပျက်ဆီးကာ
စစ်သည် ၁၃၅၀၀ ကျော် သေဆုံးပြီး တပ်မဟာလဲ ဖရိုဖရဲ လဲပြို ဆုပ်ခွာခဲ့ရတော့သည်။
မမျှော်လင့်သောအရှုံး သည် ကူဗလိုင်ခန်ဘုရင် အားလွန်စွာ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်စေပြီး နိုင်လိုစိတ်ကို ပိုပြင်းပြစေခဲ့ရာ ၇နှစ်ကျော်ခန့်
ပြန်လည် စစ်ပြင်ဆင် မှုများပြု လုပ် ပြီးသကာလ ၁၂၈၁ ဆောင်း အကုန်နွေ ဦး အကူးတွင် သင်္ဘော ၄၄၀၀ စစ်သည်အင်အား
၁၄၂၀၀၀ တို့ ဖြင့် ဂျပန် တို့ ကို ဒုတိယအကြိမ် သဲသဲမဲမဲ တိုက်ခိုက်ရန် ထွက် လာခဲ့လေတော့သည်။
သို့သော် ဂျပန်တို့ကလည်း အညံ့မခံ ၇နှစ်ကျော်အတွင်းမှာသူတို့ သည် ဟာကာတာကမ်းခြေတစ်လျှောက် အံသြ
စရာကောင်းလောက်အောင် ခံတပ် တံတိုင်းကြီးများကို အချိန်တိုအတွင်း ကြိုးစားတည်ဆောက် ပြင်ဆင်ထားနိုင်ခဲ့လေသည်။
တံတိုင်းကြီးတို့သည် ၈ ပေကျော်မြင့် ကာ ၁၀ မိုင် ကျော် ရှည်လျားလေသည်။
မွန်ဂိုတပ်တို့ ရန်သူကို အထင်သေးမိလေပြီ၊ ကမ်းတက်စစ်တပ် နှင့် ဒေသခံ ဂျပန်တို့ ၏ စစ်ပွဲကားကြောက်ခမန်းလိလိ
လက်ရည်တူညီ ကာ အကျဆုံးများစွာနှင့် နှစ်ဦး ၂ဖက် အသာစီးမရပဲ တိုက်နေခဲ့ရာ ..ကူဗလိုင်ခံ စစ်တပ် ဗျူဟာပြောင်းကာ
အဓိကကြသော ကျူရှူး အလယ်ပိုင်းကို ပြောင်းတိုက်ရန် ထွက်လာခဲ့ရာ
အင်အားကြီး သော တရုတ်ပြည်မှ နောက်ကျ ရောက်လာသော ကူဗလိုင်ခံ၏ စစ်ကူရေကြောင်း တပ်မဟာနှင့်
နှစ်လ ခန့် အကြာတွင် ပူးပေါင်းမိလေတော့သည်။
ထို့နောက် တာကာရှိမာ နှင့် ကျူရှူး အထင်ကရနေရာများသို့ ကျူးကျော်စစ်စတင်ပြန်လေသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဂျပန်ပြည့်ရှင် အင်ပါယာ နှင့်တစ်ကွ မှူးမတ် သေနာပတိတို့ကလည်း အစဉ်လာမပျက်
Shinto ဘုရားကျောင်း နှင့် နိုင်ငံ အနှံပြားမှာ ပင်လယ်စောင့် နတ်ဘုရားတို့ အား ပူဇော်တိုင်တည် ပြီး မိမိတို့ နိုင်ငံအား
သူတို့ ၏ ကျမ်းသစ္စာ ၀တ်ပြုပွဲ အောင်မြင်ခဲ့သည့်ပမာပေ ၁၂၈၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ တွင် Divine Wind ခေါ် တိုင်ဖုန်း မုန်တိုင်းကြီး
တာကာရှီမား အနီးတစ်ဝိုက်ကို ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လေတော့သည်။
အရင်းစစ်သော် မွန်ဂို တပ် သင်္ဘော အားလုံးနီးပါး အစင်း၄၀၀၀ ကျော် နစ်မြုပ်သွားပြီး စစ်သည် သိန်းကျော်သေဆုံး ခဲ့ရပြီး
ကမ်းခြေ အရောက်လွတ်မြောက်လာသူများမှာလဲ ဂျပန်တို့ ၏ အသင့်စောင့်စားသတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရလေတော့သည်။
မွန်ဂိုဘုရင် ကူဗလိုင်ခံ စစ်ကြိုးခဲ့လေသည် ဆုံးရှုံးသွားလေပြီ ကျဆုံး ခဲ့လေသည်။ ထိုနောက်တွင် မည်သို့သောအချိန်မှာတစ်ဖန်
ပြန်လည် စစ်မဆင်နိုင်တော့ ဘဲ ကွယ်လွန်သေဆုံးသွားကာ မွန်ဂို အင်ပါယာ လဲ တစ်ခန်း ရပ်ခဲ့ပါတော့သည်။
ယနေ့ တိုင် စစ်ဖြင့် ရာထိုဒေသ ရေအောက် ကမ်းခြေ များတွင် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများမကြာခဏ ရှာဖွေ နေကြဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။
(ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၁၇၊၁၈ ရက်နေ့ တွေက ကျနော် တို့ သင်္ဘော တရုတ်ပြည် Qingdao မြို့မှ ကိုရီးယား Busan ကို ဖြတ်နေတုန်းမှာ
Typhoon KHUNAN နဲ့ ပက်ပင်းတိုး အလူးလိမ့် ခံ ခဲ့ ရတဲ့နာရီတွေ မှာ ကျနော် ဒီ Article လေးကိုသတိရသွားလို့ ရေးဖြစ်အောင်ရေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။)
REF: National Geographic November 1982. Kamikaze ! Divine wind saves Japan